जन्मदिन - बाल्यकाल को उत्सव,
र कतै यसलाई जाने छैन।
लोकप्रिय गीत उम्कन सक्दैन भनेर हामीलाई र हाम्रो सम्झाउने। र यो एउटा उपहार तयार गर्न आवश्यक छ। के तपाईंले आफ्नो सबै भन्दा मूल मान्छे खुसी पार्न चाहनुहुन्छ भने, त्यस्तो मूल साथ आए विशेष गरी छ?
म हामी बच्चाहरु थिए जब एक समय सम्झना। प्रस्तुत लागि पैसा भइरहेको छैन, हामी आमाबाबुको लागि प्रस्तुत गरे, आफ्नै हातले हजुरबा हजुरआमाले। आनन्द, स्नेह र आफ्नो आँखा मा आनन्द कसरी!
आजको संसारमा त्यहाँ महंगा उपहार को एक विशाल विविधता छ, तर तिनीहरूले आफ्नै हातले छन् कि ती संग तुलना केही लायक छन्। यी कुराहरू न्यानोपन र मायालु ध्यान भरिएका छन्। तिनीहरूले अमूल्य छन्।
सबैलाई सामान्यतया बच्चाहरु भन्दा प्रेम नातिनातिनी थप हजुरबा हजुरआमाले थाह छ। वर्षौंदेखि हाम्रो हजुरबा हजुरआमाले भावुक हुँदै गइरहेका छन्, र सबै भन्दा सरल कुराहरू, छोराछोरी र नातिनातिनी द्वारा दान, सबै भन्दा तिनीहरूलाई लागि महंगा छन्। तसर्थ, एउटा उपहार "kalyaki-ट्रांसमिशन सिस्टम र घटकों" बच्चाहरु प्राप्त - यो एक विशेष खुशी र आनन्द हो। तर गम्भीर, उपहार कस्तो मेरो हजुरबुबा दिन? यो हामी अब छलफल हुनेछ।
सबै भन्दा राम्रो उपहार आफ्नो नाति मेरो हजुरबुबा - चित्र
बच्चाहरु ठूलो कलाकार हो: कागज को एक सफेद पाना वा एक टी-शर्ट मा सानो हात र खुट्टा मुद्रित गर्दछ धेरै प्यारा हेर्न हुनेछ।
आमाबाबु हो, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र साथीहरूसँग जवान प्रतिभा मद्दत गर्न सक्छ। तपाईं शाखा संग एक रूख आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ, र परियोजना प्रत्येक प्रतिभाशाली सदस्य एक शाखामा एक पत्ती को रूप मा एक औंठाछाप छोड्न हुनेछ। यसलाई आफ्नो नाम वा इच्छा लेख्नुहोस्।
एक उपहार हजुरबुबा, एक लामो समय को लागि उसलाई सम्झना गर्ने कसरी बनाउने? को बच्चा कविता भन्छ वा प्रिय हजुरबुबा को सम्मान मा एक गीत गाउन भने हास्यास्पद छ। र उहाँले केही रेखाहरू राइम प्रयास (पाठ्यक्रम वयस्क को मद्दत संग), हजुरवुवा रोमाञ्चित गरिनेछ भने!
व्यक्तिगत यसलाई न्यानो कम्बल वा स्वेटर, रूमाल, मोजा वा Mittens बाँधिएका - नातिनी-needlewoman एक चिसो जाडो साँझ आफ्नो चासो, उनको उपहार मा तैयार गर्दा बारे हजुरबुबा सम्झाउने। हजुरवुवा जन्मदिन, उसले आफ्नो हात, इच्छा र प्राण, र असामान्य गरे। embroider वा मोती तस्वीर किचेनमा बुनाई गर्न सक्नुहुन्छ।
जन्मदिन हजुरबुबा - आफूलाई प्रमाणित गर्न मास्टर नाति लागि एक उत्कृष्ट मौका। र, उदाहरणका लागि, कुञ्जीहरू लागि स्पेयर हुक बनाउन। यो गर्न, पुरानो तरिकाहरू हुक मा मोड छ र एक काठ पट्टी गर्न nailed।
जहाँ त्यहाँ छोराछोरी छन् प्रत्येक घर, मा, तपाईं ज्योति प्रमुख छल्ले र जो तपाईंले तिनीहरूलाई समाधान गर्न सक्छन् प्यानल बनाउन जो देखि डिजाइनर देखि विवरण छन्।
हजुरबुवा, यो उम्दा उपहार Indulge गर्न आवश्यक छ।
ऐंसेलु जाम वा सुन्तला को jar मात्र मीठो चिया गर्न पूरक छैन, तर पनि सर्दी को रोकथाम।
केक वा कुकीहरू घरेलू उत्पादन आनन्दित मुस्कान हजुरबुबा कारण हुनेछ।
वयस्क परिवारका सदस्यहरूलाई विशेष जन्मदिन नास्ता तयार गर्न सक्नुहुन्छ।
, रातो हरियो र / वा पहेंलो घंटी मरिच, कटा छल्ले;
एक हट कराइ, घिउ संग greased मा, रंगीन घन्टी घण्टी खुर्सानी फैलाउन भित्र अन्डा ठोक्नुहोस्, grated पनीर र जडीबुटी संग छिडकना। नास्ता सेवा छ, सर!
ग्रिल मा चकलेट केले संग हजुरबुबा-एक मिठाई दाँत तयार। केरा lengthwise कटौती, छील छोड्नुहोस्। को transverse incisions को टुक्रा सम्मिलित चकलेट। चकलेट माथि heats र पिघलने। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, विशेष गरी यदि यो प्रेम भरिएको छ आफ्नो हात हजुरबुबा एक उपहार गाह्रो छैन बनाउन।
एक स्वादिष्ट खाने र मिठाई पछि, हामी एक सुन्दर भएको परिवारको प्रत्येक सदस्य एक वा बढी प्रश्न द्वारा लेखिएको थियो, रंग पात संग पारदर्शी जार Granddaddy दिनुहोस्।
आफ्नो बाल्यकाल कस्तो थियो?
आमाबाबुले के थियो?
को सपना के हो?
आफ्नो बाल्यकाल देखि हास्यास्पद कथाहरू?
जीवनमा सफलता को लागि सूत्र?
पहिलो जवान प्रेम?
विगत देखि प्रिय सम्झनाहरु?
को हजुरबुबा उपहार प्रस्तुत, तपाईं आफ्नो जीवन कहानी थाहा रुचि हुनेछ भन्ने व्याख्या। कार्य जन्मदिन - प्रश्नहरूको को मद्दतले memoirs एक पुस्तक लेख्न। यो हजुरबुबा लागि हो भने - एक एकदम समय-खपत प्रक्रिया, बस एक सर्कल मा बस्न र आफैले आफ्नो कथा सुन्न।
तपाईं सँगै हुन्छन् हजुरवुवा हजुरआमा संग बस्नुहुन्छ भने, उहाँले तपाईं हरेक दिन देख्न सक्नुहुन्छ कि होइन। तपाईंको फोटो संग फ्रिज मा एक चुम्बक बनाउन। यो सजिलो छ। तपाईंलाई पुरानो चुम्बक प्रयोग गर्न वा रचनात्मकता टेप लागि भण्डारमा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। चुम्बक फोटो भन्दा अलिकति कम हुनुपर्छ। पहिले तपाईं बाक्लो गत्ता मा एक चुम्बक गोंद गर्न, र त्यसपछि पेस्ट र फोटो आवश्यक छ। त्यसैले यसलाई आफ्नै हातले आफ्नो हजुरबुबा जन्मदिन ठूलो र असामान्य उपहार गरे।
twigs बनेको लेख
जंगल मा पार्क वा विभिन्न लम्बाईहरू, widths, आकार, मोटाइ को शाखा सङ्कलन।
काठ (र उपयुक्त गोंद "क्षण") को लागि टास्ने;
तातो कप खडा
गत्ता वर्ग आकार मा बराबर मोटाइ को बारेमा 95h95 टाँसिएको शाखा नाप्ने। diagonally हुन सक्छ, एक आधा हुन सक्छ - तेर्सो, अन्य - ठाडो र4बराबर भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। twigs तोड्न तपाईं जस्तै, धेरै विकल्पहरू छन्।
सुन्दर स्टाइलिश फ्रेम
रंग जस्तै सेतो जस्तै - आवश्यक गत्ता आयताकार। ट्याग हजुरबा हजुरआमाले वा आफ्नो हजुरबुबा लागि keepsake रूपमा परिवार फोटो संग आफ्नो मनपर्ने फोटो मा। विभिन्न लम्बाईहरू को शाखा परिधि पेस्ट गर्नुहोस्। पछि गत्ता अडान गोंद।
हजुरवुवा एक retinue गुँड को रूप मा एक फ्रेम मा प्रिय नाति तस्वीर गर्न खुसी हुनेछन्। यो मूल फ्रेम पर्खाल मा राम्रो हेर्न हुनेछ।
फ्रेम मा आफ्नै तस्वीर
अरू के आफ्नो जन्मदिन लागि twigs हजुरबुबा उपहार देखि गर्न सकिन्छ? आफ्नो हातले असामान्य फ्रेम रंग बटन वा मोती संग सजाया गर्न सकिन्छ। उज्ज्वल शाखा, पछाडि जानुहोस् वा रंगीन रिबन को सूत्रहरू हेर्न हुनेछ।
असामान्य उपहार को निर्माण को लागि विचार, धेरै छन्: शंकु देखि शिल्प, जूता बक्स मछलीघर, एक प्लेट वा पकवान, घर बनाएको मोमबत्ती देखि एक पर्खाल घडी। तपाईं तयार हुनुहुन्छ भने एउटा उपहार हजुरबुबा जन्मदिन, किनभने प्रिय हजुरबुबा लागि, यो धेरै सजिलो हुनेछ गर्न आफ्नो हातमा महत्त्वपूर्ण कुरा, छैन सौंदर्य पक्ष हो, र के तपाईं यसको बारेमा विचार गर्यौँ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, प्रेम र स्नेह प्रिय हजुरबुबा घडी disheartening न्यानो मा आफ्नो कृति राखे।
हामी तपाईँलाई असामान्य र रचनात्मक विचार इच्छा! आफ्नो प्रियजनलाई हेरविचार!
Tulip आफ्नो हातले कागज pleated। नालीदार कागज को तुलिप्स: मास्टर क्लास
बोलेरो आफ्नै हात सी? त्यहाँ केही सजिलो छ!
स्क्रैप सामाग्री शिल्प के गर्न सकिन्छ?
कसरी खाना पकाउनु पास्ता गोले भरी
कुलपिता Nikon को चर्च सुधार को मुख्य निर्देशन: परिणामहरू र मूल्य
पहाडी Moklame: खेती र मर्मतका
"स्मार्ट घर" आफ्नै हातले: योजना र उपकरण। "स्मार्ट घर" को एक प्रणाली स्थापना कसरी गर्ने?
ओवन वा माइक्रोवेव मा पाकेका स्याउ। तयारी
बुलगकोवको उपन्यास र जीवनमा पन्टियस पिलेट
आफ्नै हातले प्लास्टिक बोतल देखि गहने। बगैचा लागि सजावटी मूर्तिहरु
लिसा पिटरकिना: पुस्तकहरु, सेमिनारहरु